Hevitra avy amin'ny mpanjifa | Piedra (Xiamen) Sculpture Co., Ltd.
Mr. Bruce Avy Amerika (Tetikasa ho an'ny sary sokitra mirratra Mirror: 2.5m Haavo)
Misaotra anao tamin'ny sary vongana lehibe indrindra nataonao ho anay nandritra izay taona izay. Ireo sary sokitra vy matevina ireo dia tena mahavariana ary nahasarika mpizaha tany maro teo amin'ny zaridaina golf. Misaotra anao ny soso-kevitra matihanina amin'ny fametrahana. Araka ny hitanao, ny sary sokitra holatra dia nahavariana sy manintona tokoa tamin'ny andro feno lanezy! Afaka mahita taratra tsara tarehy ianao avy eny ambony. Ataovy mitazona fifandraisana maharitra sy tsara amin'ny ho avy.
Roeqsana avy any Indonezia (Tetikasa Vakiteny Fanaka Stainless Steel voakaly: 10,4m L * 2.3m W * 3.5m H)
Ity sary vongana lokomotera goavambe ity dia tena be voninahitra sy mahavariana fa tsara toy ny ravaka ivelany sy anaty trano. Ary nasehontsika ny sary sokitra ao amin'ny toeram-pivarotana lehibe ao Indonesia, izay lohahevitra mahafinaritra hanehoana ny kolontsaina kanto eto. Ny famokaranao tena tsara sy ny asa mafy ataonao mba hahatratrarana ny fandaharam-potoananay dia tena ankasitrahana tokoa.
Mr. David avy any Malezia(Tetikasa sary sokitra metaly mirehitra Abstract: haavo 215cm)
Ny sary sokitra vita amin'ny metaly mahavariana sy nahary anao dia nandresy lahatra tsara ny mpanjifa. Gaga sy manaitra izy ireo noho ireo marika maoderina sy ankehitriny. Ny mpiasao dia nanao asa kanto tsara be ho anay. Aoka isika hanao asa tanana amin'ny ho avy.
MR. Saif avy amin'i Oman (Mirror CircleMTetikasa fanaovana sary sokitra etal: 5m Haavo)
Wow, io sary sokitra vita amin'ny vy faribolana io, izay napetraka ho toy ny fananganana haingon-trano any ivelany. Nahavita asa tsara ho anay izahay ary tena faly izahay hisafidy anao ho orinasa miara-miasa. Ny vokan'ny fitaratra dia tsara izay afaka manome taratra ny aloka any. Andraso ny fiaraha-miasa ataontsika bebe kokoa.
MR. Michael avy Czech (Tetikasa Sculpture Steel Sport Corten: Haavo 80cm)
Nahazo ny sary sokitra sphere eto. Tena tsara ny mividy io sary sokitra aminao io. Hodidinina tsara ny tontolony ary ifandraisany tsara, izay mety indrindra amin'ny firavaka amin'ny zaridaina. Misaotra anao amin'ny hamafin'ny fanaovana sary sokitra tsara sy ny fandaminana ny fandefasana any Czech soa aman-tsara. Miandrasa fotoana bebe kokoa hiaraha-miasa.
Andriamatoa Slave avy any Israel (Tetikasa Sarivongana Karate Bronze: 1m haavony）
Misaotra betsaka tamin'ny sary vongana mahafinaritra nataonao ho anay. Ny sarivongan'i Karate dia tena azo tanterahina izay napetraka ho toy ny haingon-trano i Dojo. Gaga be aho fa vitanao ny mamorona azy ho sary sokitra tena izy raha tsy araka ny sary sy ny famaritana. Raha atao teny iray dia misaotra ny ezaka rehetra nataonao ho anay. Na izany na tsy izany, mijereva hatrany amin'ny orinasa sarivongana.
Ms.Zarema avy any Norvezy (sary sokitra Baron Fiberglass: 2m haavony）
Ity Baron Sculpture ity dia tena nisy nitovy tamin'ny sary nomeko. Faly be aho fa afaka mividy sary sokitra amin'ny serasera. Tena nanohina ahy ny fahalalanao matihanina amin'ny fanamboarana sary sokitra sy ny serivisy teo aloha. Ary tena mankasitraka ny valin-teninao haingana momba ny sary sokitra. Ny faniriana dia afaka miara-miasa amin'ny ho avy.